Ikhaya / Izicelo / Ukushisa Ukushisa / induction preheating aluminium amasondo wokudweba isifutho
Isigaba: Ukushisa Ukushisa Tags: isondo le-aluminium, Ukushisa kwesondo le-aluminium, i-aluminium preheater, ukushisisa amasondo ezimoto, isifudumezi sokungeniswa, ukukhishwa kwesilwane, induction preheating aluminium, amasondo wezimoto afudumele kuqala, isondo lokufudumeza lokungeniswa, imvamisa ephakathi, ukushisa okuvamile, ukushisa, ukushisa isondo le-aluminium, ukushisa amasondo e-aluminium wezimoto
induction preheating aluminium amasondo yokudweba kwesifutho
Injongo: Lolu hlelo lokusebenza lokudweba lokufafaza ludinga ukushisa kuqala impahla. Ngokwengeziwe, kunesidingo sokuthi okokusebenza akumele kuphole ngaphansi kwezinga lokushisa elithile ngaphambi kwesifutho.
Material : Izingxenye ezinikezwa ngamakhasimende
Temperature : 275 ºF (135 ºC)
imvamisa : 8 kHz
I-DW-MF-70kW ukufakwa kokushisa uhlelo, ifakwe ikhanda lokusebenza elikude eliqukethe ama-capacitors ama-27 μF amathathu ingqikithi yama-81 μF
- Ikhoyili yokufudumeza eyenzelwe futhi yathuthukiswa ngqo yalolu hlelo lokusebenza.
Inhlanganisela yamakhoyili amaningi we-helical / pancake isetshenziswa. Isondo le-aluminium lama-22 ”lifakwa kwikhoyili bese lifudunyezwa imizuzwana engama-30 kushisa elingama-275 ºF. Lapho ukufudumeza kumisiwe, ingxenye ihlala kuma-ºF noma ngaphezulu kuka-150 forF amasekhondi ayi-108, kufezekisa imfuneko yokushisa ekhonjiwe.
Imiphumela / Izinzuzo Ukushisa ukushisa inikeza:
-Ukusatshalaliswa kokushisa okungafani nesondo
Ukulawulwa okuqondile kokushisa nephethini
-Ukusebenza kahle; kunciphise izindleko zamandla